MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » Xaalada guud ee cusbitaalka Hargeysa 2 aad
Xaalada guud ee cusbitaalka Hargeysa 2 aad
Xaalada guud ee cusbitaalka Hargeysa Waxa aynu ka soo hadalnay qaybtii hore xaalda guude ee cusbitaalka Hargeysa.
Waxa aynu maraynay markii dagaaladu ka dhaceen Hargeysa sannadku markuu ahaa 1988, bishii Maj 31-keedii. Sidii aynu horeba u soo sheegnay waxa jiray dad bukaana oo dagaaladii ugu dhaceen dhakhtarka Hargeysa. Dhakhtarka oo markaa ku yaalay halka uu imminka ku yaalo, oo markaa dagaaladu socdeen ay nawaaxigiisa ay dawladii Siyaad Barre gacantaku haysay. Markii dagaaladu dhaceen ee dhaawacii ciidamada Siyaad Barre qaadi waayey dhakhtarkii militariga loogu talo galay, ayaa waxaa dhacday in ciidankii dagaalka ku soo dhaawacmay la keeno dhakhtarkii dadka caadiga ah la dhigi jiray (Cusbitaalka Hargeysa). Xaaladii dhakhtarka Hargeysa kaddib markii lagu soo noqday magaalada ee 1991
Waxaa laga qaxay magaaladii Hargeysa oo ay dadkii ka qaxeen 1988. 2 sanno ka dibb markii dib loogu soo noqday magaaladii Hargeysa, ayaa waxaa lagu soo noqday cusbitaalkii guud ee Hargeysa oo haawanaaya (madhan) oo wax yaala oo qalibi aanu jirin. Waa la bililiqaystay wixii yaalay, inkastoo aanay marka horeba aanay wax qalaboo sidaa u sii wayni aanahy jirin, haddana sariirihii, iyo mishiino laydhka shidi jiray iyo alaabo kale oo dhakhtarku lahaa ayaa la bililiqaystay. Waxa la soo gudboonaatay cusbitaalkii duruufo aad u adag. Waxaa la bilaabay sidi qalab iyo sariiro loo dhigi lahaa cusbitaalka oo marxalad tii ugu xumayd abadiyan soo marta cusbitaalka Hargeysi intii uu jiray. Waxaa dhacday in dhakhtarkii dib loo kiciyo tiiyo lala khaashanayo hayáddaha UN-ta iyo xukumadda Somaliland. Ilaa 1991 ilaa imminka oo dawladdo/xukumado kala duwani ay gacanta ku hayeen dhakhtarka ayaa weli aan gaadhin heerkii la doonayey in uu gaadho. Horumarkiisu xawli kuma socdo.
Waxaa aan tegay dhakhtarka Hargeysa oo aan booqday bishii Feberweri ee sannadkan 2011. Wiigii waxaan tegi jiray 3-4 cisho oo soo booqan jiray. Inta aan booqanayo waxa aan la sheekaysan jiray shaqaalaha iyo dadka bukaanka ah.
Markii iigu danbaysay in aan booqdo dhakhtarka waxa ay ahayd 2001 bishii Juli. Muddo la joogo toban sanno.
Waxa aan odhan karaa 10 sanno horumar yar oo la taaban karo uu gaadhay yaanu noqonin haddana mid sidii la doonayey aanu ahayn. Markii aan 2001 tegay waadhadh dhan ayaan shaqaynaynin oo madhnaa oo xataa xabad sariiri aanay oolin. Halka imminka waadhadhku ayaa sariiro yaalaan iyo dad bukaanina ay jiifaan. Maxaa la taab karaa oo lagu soo kordhiyey dhakhtarka.
1- Guddi u gaara cusbitaalka guud ee Hargeysa
2- Waxaa la sameeyey dhisme cusub oo talaagado leh si meydka la dhigo
3- laba Misaajid mid yar iyo mid weyn oo dhakhtarka ku yaala
4- Waxaa dibu habayn lagu sameeyey waadhadhka iyo makhsinada danbe ee keli kelida loo seexdo oo laga bedelay daqaaqadihii
qadiimiga ahaa oo la galiyey qaar casriya, dhulka oo marmar cad la dhiagy, gudaha waadhadhka iyo qololka yar yar oo rinji cad la mariyey
5- dhisme cusub oo qaliinka loogu talo galay oo dhisay (muddo iiminka dhisnaa)
6- Dhisme shaybaadha (dhawr sanno jira)
Muxuu u baahan yahay in wax laga qabto oo u baahan la horumariyo.
1- Maamul joogta ah oo aqoonteedii u leh arrimaha caafimaadka ee cusbitaalka Hargeysa dhexdiisa ka socda. Maamul tayo leh.
2- Aqoonta shaqaalaha oo kor loo qaado. (Waxaan arkayey intii aan booqanayey ardey badan oo aan uu u badan dhallinyaro oo weli dhamaystiran waxbarashadii caafimaadka oo ka shaqaynayey waadhadhka) waxa aan marar badan isweydiinayey shaqaalihii caadiga aha talo wxagey tageen.
3- Kayd dawooyinka (maaha in qofkii bukaanka ahaa la yidhaahdo adigu soo iibso dawadaada, irbadaa iyo wixii kale ee qofka lagu daawaynayo. Qofkan bukaanki wuxuu u baahan yahay daryeel, waxa ay masuuliyadu saaran cusbitaalka . wixii kharash ee hadhow lagu soo dalacayo qofka bukaanka waa halkeeda.
4- In Wakhti loo sameeyo qofka bukaanka ah la soo booqdo. (Qofkii xanuusanayey maba nasanyo, intaasoo qof ayaa gelin hore iyo danbeba dul taagan.
5- Nadaafada cusbitaalka kor loo qaado haday noqodto waadhadhka, suuliyada, iyo dibedaba.
6- Waadh casriya oo Emergency ah (gargaarka degdeg ah) oo leh shaqaalo tayo leh oo xirfad caafimaad leh
7- Shaybaadh casriya oo oo leh shaqaalo tayo leh oo xirfad caafimaad leh (Sheybaadhka imminka ku yaala cusbitaalka maaha mid dabooli kara baahida dadka bukaanka ah
8- Biyo nadiifa oo ku filan.
9- Qayb information ka la waydiin karo (Reception)
10 Ciidamo gaara oo ilaaliya amaanka guud ee cusbitaalka (waxaa magaalda ka dhcay dhawr dil intii aan joogay, qaar ka mida dilalkas markii maydkooda la keenay waxa aan ku sugnaa cusbitaalka. Waxaa jiray dareen keeni karayey dhibaato. Runtiina ciidamo boolisa ayaa la keeni jiray markaas si aanay rabshado dhibaatoahi ug dhicin dhakhtarka gudihiisa. Sidaa darteed dil iyo dil laáanab waa muhuum in dhakhtarku yeesho ciidamo amaanka bukaanka ilaaliya